Inzukazikeyi ngeMeya iqubule intukuthelo - Bayede News
Home » Inzukazikeyi ngeMeya iqubule intukuthelo
Ubuholi baKwaZulu-Natal buyehluleka ukuphumela eshashalazini, bucacise ngekusasa leMeya kaMasipala i-Alfred Duma, eMnambithi, enyakatho ntshonalanga nesifundazwe, uKhansela uVincent Madlala. Sekungelesibili leli sonto uMnambithi uvutha amalangabi. UNdunakulu wesifundazwe, uMhlonishwa uSihle Zikalala, ushenxise ezinye izinhlelo zakhe zomsebenzi kaHulumeni, wagxila ezinkingeni ezikhungethe leliya dolobha elingumnyombo womnotho esifundeni esingaphansi kwezintaba zoKhahlamba nesizalo somfula uThukela. Umphakathi osuvale thaqa ukusebenza eMnambithi, uthi awusamfuni uSozabe (iMeya uMadlala), ngoba akasebenzeli umphakathi owamkhetha, kodwa uzicebisa yena namalungu omndeni wakhe, ekubeni uquqaba lwabantu ludla imbuya ngothi, e-Alfred Duma.
Esikhundleni sokugxila odabeni lweMeya okhukhalwa ngayo, uNdunankulu uKhuzeni, uvele wengeza amaphoyisa namasosha eMnambithi namaphethelo, “ukuzobuyisa isimo kwesejwayelekile”. UKhuzeni, uhlanganise uMphathiswa Wezokuthuthukiswa Komnotho esifundazweni, uMhlonishwa uNomusa Dube-Ncube, iziMeya zoMasipala abangaphansi kwesiFunda uThukela, osomabhizinisi, abasembonini yamatekisi, amalungu omphakathi akhathazekile, uKhomishana Wamaphoyisa esifundazweni, uKhombinkosi Jula, ngenhloso yokuthola umnyombo wezinkinga, ebese eqhamuka nezixazululo emuva kwalokho. Ngalokhu uNdunankulu uKhuzeni, ubonakale engayihlabanga esikhonkosini ngoba kuze kube manje akakakhulumi ngomnyombo wenkinga.
Abantu baseMnambithi bathi ngeke baze baphumule esakhona uMadlala, e-Alfred Duma, ngoba lo Madlala udlala ngabo. Bathi akugudluzwe uSozabe esikhundleni sobumeya khona impilo izoqhubeka njengokujwayelekile eMnambithi. Sibi isimo eMnambithi, selokhu iqalile le mibhikisho enodlame, umnotho uwile bhu phansi. Ngosuku olulodwa nje, ngokusho kwenhlangano eyangamele amabhizinisi eMnambithi, iLadysmith Chamber of Commerce, kulahleka izigidi ezingama-R30. Amanye amabhizinisi aphoqelekile ukuthi avalwe ngenxa yesimo esishubile. Kuleli sonto bezingekho izimoto ezithutha umphakathi ukuya nokubuya edolobheni eMnambithi. Lokhu kusho ukuthi uma izisebenzi zingayanga emisebenzini namaholo azobanjwa.
Lokhu kulahlekisela izisebenzi ngezigidi ezi-R2 ngosuku. Izingane ezifundayo bezingayi ezikoleni kuleli sonto ngoba izinto ezizithuthayo bezivinjwa. NgoMsombuluko ebusuku, kushiswe kwangqongqa amaloli amahlanu amakhulu athwala impahla, emgwaqeni u-R603, phakathi kweColenso nendawo yezimboni iPieters, ngaphandle kancane kwedolobha uMnambithi. Abanikazi nabashayeli bamaloli angqongqiswe ngomlilo, bathi abahlangane ngalutho nezinkinga ezikhona eMnambithi. Omunye wabashayeli ophume ngesamagundwane, umphakathi obuvutha bhe, ushisa iloli abelishayela, uthi impahla ecekeleke phansi abeyithwele, ibalelwa ezinkulungwaneni ezingama-R450.
Umgwaqo onguthelawayeka, (u- N3), oseduze kwakhona eMnambithi, futhi obalulekile emnothweni wezwe njengoba uxhumanisa izifundazwe ezintathu iKwaZulu-Natal, iFree State neGauteng, kuphoqelekile ukuthi uvalwe amahora athile ngoLwesibili ntambama, ngoba isimo besingasalawuleki. Izimoto nezithuthi, kuphoqeleke ukuba zihambe ngemigwaqo emincane ejika eTugela Plaza. Konke lokhu kungenxa yokuthi abantu abayifuni iMeya uMadlala esikhundleni. UNdunankulu uZikalala, emizamweni yokubhula umlilo, uvele wandisa amaphoyisa namasosha ukuthi balwe “nos’khwili phambana nobhoko” kuleya ndawo. UKhuzeni uthe angeke bengabaholi besifundazwe behluleke ukuhlukanisa izikhalo zezakhamizi, nalabo abafuna ukufeza izinhloso zabo zobugebengu.
Kukhona abantu abebeyingxenye yemibhikisho enodlame ababoshiwe kuleli sonto kodwa lokhu akwenzanga ukuthi abantu bayeke ukucekela phansi impahla. Izinkinga ezikhona eMnambithi, sezithikameze nokulethwa kwamanzi kwezinye izindawo ezakhele i-Alfred Duma. UMnu uLennox Mabaso, okhulumela uHulumeni wesifundazwe, uthi udweshu lwaseMnambithi, aludalwa yindoda eyodwa njengoba abanye abantu becabanga kanjalo, kodwa sekuno”somathuba” abasebenzisa leli thuba lokulwa izimpi zepolitiki. “UNdunankulu nesigungu sakhe balusukumele ngokushesha udaba lwase- Alfred Duma. Uye laphaya njengomholi wesifundazwe, hhayi njengomholi wenhlangano yepolitiki. Sekukhona asebefaka ipolitiki kulezi zinkinga zaseMnambithi. Abantu abakhumbule ukuthi iMeya yase-Alfred Duma, uMnu uMadlala, yakhethwa ngamakhansela. Yiwona futhi angayikhipha esikhundleni iMeya uma engasagculisekile ngendlela esebenza ngayo. Ubuholi besifundazwe abuhleli phansi, buyasilungisa isimo saseMnambithi,” kusho uMnu uMabaso.
UMnu uMaliyakhe Shelembe, onguMholi weDemocratic Alliance, esiyingini sase-Alfred Duma, uthi sebebhalele uNgqongqoshe Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu kuZwelonke, uDkt uNkosazana uMaDlamini Zuma, bemxusa ukuba angenelele ngokushesha ezinkingeni zase-Alfred Duma. “Sicele uDkt uDlamini-Zuma ukuba asebenzise iSigaba 139 (7) soMthethosisekelo, esimgunyaza ukuthi angenelele uma izifundazwe zehluleka ukwenza umsebenzi wokuletha inhlalakahle, izinsiza, nentuthuko emiphakathini. I-ANC isonge izandla ibe ibona uMnambithi ucekelwa phansi ngumuntu oyedwa ngoba nje eyicomrade labo. Impilo ime nse eMnambithi, ngenxa nje yomuntu oyedwa,” kusho isitatimende sikaShelembe. IMeya uMadlala ithi yona ayiyindawo, ngoba ibhecwa ngobubende inyama ingayidlanga. Isimo sisashubile eMnambithi.